Qarax gaari oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQarax gaari oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha Muqdisho
Qarax gaari oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha Muqdisho
Qarax gaari oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha Muqdisho. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay markii gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa lagu dhuftay meherad kutaala bartamaha Muqdisho laguna qarxiyay maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo kuwa caafimaadka.
Qaraxa ayaa waxaa daba socday rasaasta qoryaha, qaraxa ayaa lala eegtay meherada Talyaaniga oo kutaala meel u dhow xafiiska socdaalka ee Muqdisho, sida ay wararku sheegeen.
In ka badan 10 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Caasimada Soomaaliya ayaa aragtay weeraro badan oo dhiig ku daatay intii lagu guda jiray asbuucayadii u horeysay ee sanadka 2017-ka, oo ay geysatay ururka hubaysan ee Al-Shabaab, balse tirada ayaa hoos u dhacday ilaa iyo dhawaan.
Dhawaan, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah maleeshiyada, taasoo doonaysa in ay meesha ka saarto dowladda uu caalamku aqoonsanyahay ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
July 16, 2017 Maleeshiyada ISIS oo boobaysa xoolaha gobolka Bari
April 26, 2017 Ciidamada ammaanka Puntland oo magaalada Boosaaso kusoo bandhigay walxaha qarxa iyo nimankii watay
Qaramada Midoobay oo sheegtay in 3,800 qaxooti ah ay sanadkan 2016-ka ku dhinteen badda Mediterranean-ka
London-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 3,800 qof oo qaxooti ah ayaa ku dhimatay badda Mediterranean-ka iyaga oo isku-dayayay in ay gaaraan Yurub ilaa iyo sanadkan, taasoo ka dhigaysa 2016-ka sanadka ugu dhimashada badnaa diiwaanka, sida ay [...]